Mourning the death of Siddhartha Auji - Possible
सिद्धार्थ आउजीको शोकमा
(यो सुचनामा आत्म-हानी र आत्महत्याको बारेमा लेखिएको छ। यदि तपाइलाई आत्म-हानी वा आत्महत्याको सोचाई आएको छ भने, अमेरिकामा १-८००-२७३-८२५५ र नेपालमा १-६००-०१०-२००५ (बिहान ८ बजे देखि बेलुकी ६ बजे सम्म) सम्पर्क गरेर तालिम पाएका व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।)
न्याय हेल्थ नेपालमा कार्यरत सिद्धार्थ आउजीको असामयिक निधनले हामीलाई स्तब्ध, शोकाकुल र आक्रोशित बनाएको छ। वहाँले बयालपाटा अस्पताल अगाडी आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो, अनि उपचारको क्रममा कोहलपुर पुगेपछि वहाँको निधन भयो। सिद्धार्थ आउजीको शोकाकुल परिवारप्रति हामी गम्भीर समवेदना प्रकट गर्दछौं।
सिद्धार्थजी गत साढे एक बर्ष देखि बयालपाटा अस्पतालमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालको सरसफाईको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर वहाँले उपचार गर्न आउने समुदायका व्यक्तिहरुको लागि स्वच्छ, सुरक्षित र गरिमामय वातवरणको सिर्जना गर्न विशेष मद्दत पुर्याउनुहुन्थ्यो। सीमान्तकृत दलित परिवारबाट आउनुभएको सिद्धार्थजी अछामको साँफेबगरमा बस्नुहुन्थ्यो। न्याय हेल्थ नेपालले पाउने आर्थिक अनुदानमा कमि भएको र संस्थाबाट वहाँको रोजगारीको करार नविकरण नगरिएको अवस्थामा यो घटना घटेको हो।
हामी शोकमा सिद्धार्थजीलाई सम्झिदै आफूलाई, आफू आबद्ध भएको संस्थालाई र यी सबैलाई समेट्ने परिवेशलाई गम्भीर रुपमा नियालेर हेर्दैछौँ। यो क्रममा हामीले अप्ठ्यारा तर सोध्न जरुरी प्रश्नहरु पनि अघि सार्दैछौँ: वहाँको मृत्युलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्थ्यो? वहाँको रोजगार र वहाँको मान मर्यादालाई जोगाउन अझै के गर्न सकिन्थ्यो? गम्भीर तनावमा परेका अनि जीवनमा अरु विकल्प् नदेखेका एउटा दलित स्वास्थ्य सेवाकर्मीको जीवनलाई कसरी जोगाउन सकिन्थ्यो? यी प्रश्नहरूको उत्तर पत्ता लगाउन अत्यन्त जरुरी छ।
कसरि पोसिबलको आफ्नै भित्रि संरचना, आन्तरिक प्रक्रियाहरु, र व्यवहारहरूले यो अन्याय निम्त्याउन मद्दत गर्यो भन्ने कुरामा गहन विश्लेषणको लागि पोसिबलका स्टाफ, बोर्ड, तथा सल्लाहकारहरू प्रतिबद्ध छन्। न्याय हेल्थ नेपालसँग दश वर्षभन्दा लामो साझेदारी गर्दै आएको परिवेशमा पोसिबलले निम्न प्रतिबद्धता गर्दछ:
१. पोसिबलले सिद्धार्थजीको परिवारलाई सार्थक रुपमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने
२. न्याय हेल्थ नेपालले आफ्नो कर्मचारीहरुको मानसिक स्वास्थ्य को लागि उचित सहयोग र सेवा प्रदान गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने
३. सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न आर्थिक सहयोग संकलनको कार्यलाई निरन्तरता दिने
४. हाम्रो संस्था भित्रका असमानता हटाउन आफ्नो व्यवहार र संरचनाहरूको कडा समीक्षा गर्ने, जसले गर्दा हामी अझ प्रभावकारी ढंगले नेपालमा स्वास्थ्य र न्यायलाई अघी बढाउन सकौं
थप रूपमा, न्याय हेल्थ नेपालका लागि निम्न सुझावहरु दिदैं यी सल्लाहहरु कार्यन्वयन गर्न पोसिबलले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछ:
१. सिद्धार्थजीको मृत्यु हुनु लगत्तै अघिका घटनाहरु तथा संस्थाको संरचनात्मक भागहरुले कसरी यो घटनामा असर गर्यो भन्ने बारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने
२. असमानताका समस्याहरूमा सुधार ल्याउन र सबैभन्दा संवेदनशील कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संस्थाको रोजगार सम्बन्धि नीति-नियमहरुको पुनरावलोकन गर्ने